Atletisma – «Mada 2018»: hiadiana toerana ao anaty ekipam-pirenena | NewsMada
Atletisma – «Mada 2018»: hiadiana toerana ao anaty ekipam-pirenena
Par Taratra sur 26/07/2018
Taorian’ny an’ny sokajy zandriny, natao ny faran’ny herinandro lasa teo, hiditra amin’ny fifaninanam-pirenena, sokajy rehetra, indray ny federasiona malagasin’ny atletisma (FMA). Fihaonana, hotanterahina eny amin’ny kianjan’Alarobia, manomboka rahampitso zoma. Hanan-danja tanteraka ity fihaonana ity satria ankoatra ny anaram-boninahitra hiadiana ho an’ny atleta tsirairay, eo koa no hitiliana izay handrafitra ny ekipam-pirenena, amin’ny fiatrehana ny « Lalaon’ny Nosy » (JIOI 2019), andiany faha-11, hatao atsy Maorisy. Hangotraka tanteraka, araka izany, ity fihaonana ity, satria samy haneho ny fahaizany avokoa ny tsirairay. «Halaina ao anaty fampivondronana voalohany avokoa ireo rehetra mahavita fe-potoana tsara amin’ireo taranja rehetra, hifaninanana sy voalahatra, izay hisy eo amin’ny 40 eo ho eo ho an’ity taona ity», hoy i Mahatana Jean de La Croix, mpanazatra.
Tsy mbola ao anatin’izany ireo atleta miatrika fiofanana any Sina. Na izany aza, misy atleta mpila ravinahitra handray anjara amin’ity fifaninanam-pirenena ity, miaraka amin’ireo avy any amin’ny faritra. Anisan’ireny Rabeharison Franck, atleta miofana any amin’ny ivontoeram-piofanana any Maorisy (Ciam), eo amin’ny halavirana 400 m. Hifampitana aminy i Damien Lorin, avy amin’ny COSPN Analamanga. Tsy afaka ny hifaninana kosa i Vatomanga Gardiner Rija, tompondaka eo amin’ny sokajy U20, noho ny ratra nahazo azy.
Andrasana ihany koa ny eo amin’ny 100 m vehivavy, hifanandrinan’i Tsaravola Dedy, atletan’ny Taf Analamanga, tompon’ny anaram-boninahitra farany sy Andrianandrianina Santatra, nandrombaka ny medaly volamena, tany amin’ny “Meeting Maorisy”. Anisan’ireo hiakatra kianja koa i Ali Kamé, tompondakan’i Afrika 2012, eo amin’ny decathlon, izay mipetraka any Frantsa, ankehitriny. Amin’ity, hifaninana eo amin’ny fanipazana lefona (javelot) ny lehilahy.